Ahoana ny fanavaozana ny Sidebarin'ny hetsika WordPress avy amin'ny iCal amin'ny alàlan'ny Google Kalandrie (sy ny Google Fun hafa!) | Martech Zone
Ahoana ny fanavaozana ny Sidebarin'ny hetsika WordPress avy amin'ny iCal amin'ny alàlan'ny Google Kalandrie (sy ny Google Fun hafa!)
Alarobia, Jolay 30, 2008 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Tamin'ity herinandro ity dia nanao sonia ny tranonkalako manokana aho Google Apps. Nahazo tendrombohitra Spam aho hatramin'ny tsy niova ny adiresy mailaka tao anatin'ny taona maro ny mpampiantrano ahy (na dia tiako aza izy ireo) dia handoa $ 1.99 isaky ny adiresy mailaka ho an'ny Spam Protection, zavatra iray izay Gmail manao maimaim-poana. Ary koa, miaraka amin'ny Gmail, ianao dia miasa miaraka amin'ireo algorithma natsangan'ny mpampiasa hafa an-tapitrisany ka marina tsara!
Misy tombony fanampiny ihany koa ny fifindrana amin'ny Google Apps izay tsy tsapako akory! Ny voalohany dia ny fahaizana mampifandray ny rindranasan'i Instant Messaging an'i Google, antsoina hoe Talk, mivantana ao amin'ny sisin-tanako a Google Talk Badge.
Ary koa, efa nahazo aho izao Google Notifier, izay manaitra ahy rehefa manana mailaka aho ary, tahaka ny androany, dia mifangaro amin'ny Google Apps ary manaitra ahy rehefa manana hetsika kalandrie koa aho. Fampiharana kely tsara io.
Google Calendar iCal Fandrindrana
Angamba ny vaovao lehibe indrindra tamin'ity herinandro ity dia ny namako, Bill, namoaka momba ny fanohanan'ny Google Calendar an'i CalDav sy ny fahafahany mampifandray ny iCal sy Google Calendar. Tsotra fotsiny izany:
Sokafy ny Preferansa iCal
Ampidiro ny adiresy mailaka Google sy ny teny miafinao
Ampidiro ny adiresy kalandrie anao:
Tsy te hizara ny kalandrie voalohany ao amin'ny sidebar WordPress aho, koa nanampy Kalandrie iray hafa tamin'ny Kalandrie Google-ko aho ary avy eo nampiako azy io koa. Misy torolàlana momba ny fampifanarahana ny tetiandro faharoa amin'ny iCal. URL hafa fotsiny io.
Fampidirana Google Calendar WordPress
Ny dingana farany dia ny fametrahana ny Plugin WordPress Kalandrie Google raha te hanampy widget amin'ny Sidebaranao izay mamaky sy mampiseho ny zava-mitranga ao amin'ny Kalandrie anao. Misy nuansa vitsivitsy amin'ity plugin ity, na izany aza, izay tokony hojerena:
Misoratra anarana a Google Data API Key, mila izany ianao raha hiditra ao amin'ny toeran'ny Plugin.
Rehefa mampiditra ny adiresy XML ho an'ny sakafin'ny Kalandrianao ianao dia alao antoka fa soloinao 'feno' ny teboka farany url ka toa izao ny adiresy:
Lisitry% 40group.calendar.google.com /-bahoaka / feno
Ny lohatenin'ny widget dia tsy aseho mifanaraka amin'ny WordPress API ary ny fiasan'ny widget misy anao. Nisy olona nahafinaritra nametraka ny fanitsiana an'io tao amin'ny Google Code saingy mbola tsy navotsotra izy io. Ireto misy torolàlana momba ny kaody mankany soloina mba hanitsiana ireo olan'ny lohateny widget.
Amin'ity fampidirana feno ity dia afaka mampiasa Google Notifier na iCal aho izao ary manampy hetsika izay haseho eo amin'ny sisin-tanako! Ny habetsaky ny fotoana ilainy dia miankina amin'ny fikiranao fampifanarahana eo anelanelan'ny iCal sy Google.
Tags: kalandriegoogle kalandrieicalWordPress
Soso-kevitra momba ny karatry ny orinasa?
Aug 5, 2008 amin'ny 8: 29 AM
Tsara izany! Ny famahanana kalandrie avy amin'ny lisitry ny hetsika nataoko no fanampiana tonga lafatra amin'ny tranokalako PR - http://www.indy-biz.com!
Manaporofo indray fa ianao no mandeha any amin'ny WordPress! Misaotra!
Febroary 11, 2009 amin'ny 11:53 PM
Nahafinaritra tokoa iny. Nanandrana kalandrie hetsika maro, tsy nahita izay mety. Ny plugin Google wpng dia mety tsara afa-tsy ireo teboka etsy ambony. Ary, tsy manana fahalalana momba ny scripting aho. Noho izany…
Apr 26, 2009 ao amin'ny 7: PM PM
… manampy ny fisaorana ho an'ireo afisy etsy ambony….
Ny ohatra hita maso haingana sy mahomby dia tena nanampy tamin'ny webmaster iray niova avy amin'ny html mankany wordpress.